"Kufuneka sitshintshe imifanekiso engatshintshiyo" baxelele umzobi wabantwana odumileyo | Uncwadi lwangoku
"Kufuneka utshintshe imifanekiso engacacanga" baxelele umzobi wabantwana odumileyo
ULidia Aguilera | | Iincwadi zoLutsha, Izaziso
Umzobi ohlonishwayo waseSweden uthethile emva kombuzo obuzwe ngumhleli wakhe malunga tshintsha imbonakalo yolunye uhlobo yeenkcubeko kwiincwadi zabantwana bakho ezithandwayo.
UJan Lööf, ngubani waphumelela ibhaso le-Astrid Lindgren ngo-2011 kwicandelo loncwadi lwaseSweden olujolise ebantwaneni nakubantu abancinci, utshilo kule veki kwiphephandaba laseSweden iDagens Nyheter ukuba umpapashi wakhe wayemcele ukuba atshintshe imifanekiso yeencwadi zakhe ezimbiniNgokukodwa ukusuka kuMofar är sjörövare (ngeSpanish, uTatomkhulu uyipirate) kunye noTa fast Fabian (ngeSpanish, ukubanjwa kweFabián).
Isihloko sokuqala, uMofar är sjörövare, sasinjalo yapapashwa ngo-1966 kwaye malunga nenkwenkwe kunye notatomkhulu wakhe owayezimisele ukuba ebe ubuncwane bepirate embi egama linguOmar. Kwelinye icala, incwadi yesibini ibonisa umfanekiso wendoda enxibe isinxibo sesizwe.
U-Lööf uxelele iphephandaba i-Dagens Nyheter ukuba wayenikwe isigwebo sokugqibela, okanye wayeza kutshintsha imifanekiso kwiincwadi okanye ziya kuthengiswa kuluntu.
“Ndineminyaka engama-76 ubudala kwaye andinakukhathazeka ngokutshintsha. Ayisiyomali malunga nam, kodwa mhlawumbi nokanye ndiza kwenza ezinye iincwadi zemifanekiso zabantwana".
Izimvo zangaphambili umbhali wongeze loo nto umfanekiso wencwadi yesibini yesinxibo sesizwe wafunyanwa ulandela imodeli yomhlobo wakhe.
"Ndiyayazi lo nto angaziva ethabile. Wayeyindoda entle kakhulu "
Umshicileli uBonnier Carlse uyaliphika ibango lokuba bazirhoxisile iincwadi, esithi akukacaci nokuba ezi ncwadi ziya kugcinwa esitokhweni na.
Kwingxelo eyenziwe ngumlawuli, wathi lo mbandela unzima kwaye umpapashi usandula ukuphikisana noLööf ngemifanekiso ethile kwiincwadi zakhe ethi "inokubonwa njengokubonakaliswa okuthe nkqo kwezinye iinkcubeko".
“Indawo yethu yokuqala kukuba iincwadi zethu ziya kuba nembono ebandakanyayo kwaye zingavelisi ubandlululo. Zonke iincwadi ziyimveliso yexesha lazo ... Njengomntu mdala, isenokungabi yingxaki kwaye umntu angawubeka umsebenzi kwimeko yezembali, kodwa umbuzo ngowokuba singalindela okufanayo na kubantwana bethu.. "
Ngelixa abanye bethe impikiswano iyinto ehlekisayo, abanye bakhombe ekuthinteleni. Umlawuli waqukumbela
“Kubalulekile ukuba sikwazi ukuba nale ngxoxo kuba ibalulekile kwaye umbuzo unzima. Ungayeki ukuthengisa iklasikhi ethandwayo, okanye umngcipheko wokuba iincwadi zabantwana bethu ziphindaphinde ukucalucalula kwabafundi abancinci ”.
Uvakalise ithemba lokuba umpapashi kunye nombhali bazakufumana isisombululo kule meko.
“Kum ingxaki ibaluleke kakhulu kunezincwadi ezithile. Imalunga nendlela thina, njengabavakalisi, ngendlela ehloniphekileyo, esilawula ngayo ilifa lethu lenkcubeko kwaye kwangaxeshanye sithobela ixabiso langoku lokunika okona kulungileyo kwiintliziyo zabantwana ”.
Ndigqibezela kweli nqaku ngokukubuza umbuzo okanye emibini: ilizwe ligcwele iingcinga, hayi kuncwadi kuphela kodwa zisingqonge kuyo yonke indawo kwaye akusoloko kufanelekile ukuba kubi. Ukuzama ukutshintsha iingcinga ezigxininisiweyo ezincwadini kubonisa ukulingana okukhulu kodwa, kwelinye icala, kwaye kuthathelwa ingqalelo ukuba ezi ncwadi zombhali zizinto zakudala ezivela ngo-1966 (kwiminyaka engama-50 eyadlulayo), Ngaba kunyanzelekile ukuba utshintshe iincoko zeklasikhi ukushenxisa iingcinga ezikhohlakeleyo? Ngaba ayizukususa intsingiselo yoqobo kwaye ke isuse iklasikhi? Kwaye okokugqibela, ngaba ucinga ukuba iingcinga ezikhohlakeleyo zinokubenzakalisa kakhulu abafundi?
Ngokwam ndicinga ukuba ilizwe elijikelezwe ziimbonakalo ezingafaniyo alilunganga kodwa ukuba, ukuba sizidibanisa ngendlela elungileyo nezo zingacacanga, akufuneki kubekho ngxaki inkulu. Kwelinye icala, kubonakala ngathi akulunganga kum ukuguqula iklasikhi kuba ayihambelani noko abapapashi bafuna ngoku ezincwadini. Ndiyakholelwa ukuba kufanelekile ukuba sizithembe ngakumbi ekukwazini kwabantwana ukuba bafunde ukubeka umxholo weencwadi kunye nabazali xa kuziwa ekubaxeleleni ukuba inyani kangakanani inyani kubo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Iincwadi zoLutsha » "Kufuneka utshintshe imifanekiso engacacanga" baxelele umzobi wabantwana odumileyo
Ndivuma ngokupheleleyo kwisibonakaliso sakho sokugqibela kumhlathi wokugqibela. Ingxaki, iminyaka embalwa ngoku, kukuba uluntu luhlala lufakelwe kwezopolitiko ezichanekileyo. Ndingummeli ongqongqo wokuthetha izinto ngendlela enesidima nangokunyaniseka. Kodwa oku akuthethi ukuba umntu kufuneka awele kwibinzana elidumileyo: "Mncothule ngephepha lecuba."
Kum kubonakala ngathi kungumbhalo okanye uhlengahlengiso lokutshintsha amabali akudala ukuze ungonzakalisi abantwana (okanye nabantu abadala). Abantu abazizo izidenge kwaye nabantwana abayiyo. Ngaba unokucinga ukuba bekujongwe ukuba kuguqulwe isiphelo se "Little Red Riding Hood" ukuze kungakhuthazwa ukuzingelwa kwengcuka? Iya kuba yinto engekho ngqiqweni, ehlekisayo.
Umbuliso wombhalo ovela e-Oviedo kwaye enkosi.
Ndiyavumelana nawe, Lidia. Ngokoluvo lwam, intsomi yeklasikhi kufuneka ihlale injalo, kwaye kufuneka ihlalutywe kuthathelwa ingqalelo ixesha kunye nemeko yentlalo ngalo mzuzu.
Into ebonakala ibalulekile kum kukuba ukusukela ngoku kubhalwe amabali angenazinkolelo, ezibonisa uluntu olunenkcubeko eyahlukeneyo. Andithandi ngokukodwa ukuchaneka kwezopolitiko, kodwa endaweni yokuphelisa ubandlululo. Ukuba senza okwesibini, eyokuqala ayizukufuneka.
Imibuliso evela kumhlaba ombi!
Hayi indlela ehlekisa ngayo isiteketiso sakho, intle kakhulu. Ijongeka ngathi ligama lomlinganiswa wekhathuni.
Ndivumelana ngokupheleleyo nawe.
Imibuliso evela kumazwe ase-Asturian.
Inqaku lomhleli uEpasa wapapasha "iVersailles. Iphupha lokumkani" nguElizabeth Massie